सम्बन्धमा आत्मीयता कसरी ल्याउने
पोखरा स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भिसी सहित तीन जना विद्यार्थीको कब्जामा ! (भिडियो सहित)
लमजुङमा सनराईज बैंकको बृक्षारोपण
एनआरएनए एशिया प्यासिफिकको संयोजकमा ओम गुरुङ ‘अजिव’ द्वारा उम्मेद्वारी घोषणा
विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन
बचतकर्तालाई सनराईज बैंक सुन्दर बजारको १२ हजार उपचार खर्च
दोस्रो खुल्ला रनिङ कप भलिवल प्रतियोगिताको उपाधि गल्कोट स्पोटर्स क्लवलाई
संविधान दिवसका अवसरमा ६३४ ब्यक्तिलाई विभुषण, अधिकारी र दीक्षितलाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप
सहकारी ऐन एवम् स्थानीय तहको भूमिका विषयक अभिमुखीकरण
लोक दोहोरी प्रतिष्ठान गण्डकीमा राजेन्द्र सुवेदीको उम्मेद्वारी
मेसिनसँगै मानिसको उगबस छ, इन्द्रियसँगको सम्बन्ध कत्ति पनि छैन अनि कसरी हुन्छ सम्बन्ध गाढा ?
जेठ २८, २०७६ सारङ्गी न्यूज
एलपि भानु शर्मा
पहिले हामी ठूलो परिवारसँग बस्थ्यौँ । परिवार सदस्य संख्या न्यूनतम १०/१२ जनादेखि २०/२५ जनासम्मको हुने गथ्र्याे । एक अर्कासँग धेरै घुलमिल हुन्थ्यो । धेरै जनाको धेरै जनासँग प्रगाढ तथा आत्मीय सम्बन्ध हुन्थ्यो । एकअर्काको समस्या एउटाले सुन्न नभ्याए पनि अर्काेले सुन्थ्यो । सुखदुःख सहजै बाँडिन्थ्यो । सुख जति बाँड्यो उति बढ्छ । दुःख जति बाँड्यो उति घट्छ । यसरी सबैको हेरचाह हुन्थ्यो । तर अहिलेको सम्बन्धमा आत्मीयता भेटिन्न । बोलिरहेको, हाँसिरहेको, सँगै हिँडिरहेको मान्छेसँग पनि हामी आत्मीय हुन सकेका छैनौं । त्यति धेरै आत्मीयता भएका हाम्रा सम्बन्धहरु कसरी भत्किए ? सम्बन्धलाई महत्व दिने हामी कहाँनेर चुक्यौं ?
सम्बन्ध टुट्नुको कारण
हामीले सम्बन्ध कसरी बिगार्यौँ, नजिक बनाउन सकेनौँ भनेर खोतल्दै जाँदा के थाहा हुन्छ भने हामीले हाम्रो संस्कृतिप्रति गरेको उपेक्षा र नकार्ने प्रवृत्तिले सम्बन्ध टुटेको देख्नमा आउँछ । हामी केटाकेटी छँदा मामाघर गयौँ भने मामाघर पुग्नु अगावै हामीलाई ए भान्जा–भान्जी आएछन् भनेर स–सम्मान गरिन्थ्यो । सबैसँग केही न केही सम्बन्ध गाँसिएको हुन्थ्यो । सबैले आफ्नो सम्झिँदा खुब मज्जा आउँथ्यो । गाउँमा कुनै पाहुना भनाँै आफन्ती आए भने त्यो आफन्ती एक घरको मात्र हुँदैनथ्यो । सबैको हुन्थ्यो ।
अहिले समय बदलिएको छ । सम्बन्धहरु पहिले जस्तो छैन । एउटै परिवारको समेत भेटघाट निकै कम हुने गरेको छ । आत्मीयता हराउँदै गएको छ । यसो हुनुको एउटै कारण छ, हामी छरिएर बस्यौँ, छरिएर मात्र बसेनाँै, हामीले हाम्रो देश नराम्रो, हाम्रो चालचलन नराम्रो, हाम्रो संस्कार नराम्रो भन्नेतर्फ लाग्यौँ । यस्तो सोच एकदमै गहिरोसँग प-यो । झन् हिजोआजका बच्चाबच्चीमा यस्तो प्रकारको गहिरो छाप परेको छ । आज आमी विदेशी भएर बस्न मरिहत्ते गरेका छांै । डिभी भर्न लाइन लागेका छाैं । आफ्नो र आफूलाई घृणा गरेका छाैं ।
तर अहिले त्यो अनुभूति पाइन्न त्यसको पछाडि एउटै कारण छ । हामी यताउति छरिएर बस्याैं । छरिएर बस्दा पनि मेरो देश नराम्रो, मेरो घर नराम्रो, मेरो समाज नराम्रो, हाम्रो चालचलन नराम्रो, हाम्रो संस्कार नराम्रो भनेर नकारात्मकता केलाउनेतर्फ लाग्याै । यस्तो सोच एकदमै गहिरोसँग प-यो । आज हामी विदेशी नागरिकता लिएर बस्न थाल्याैं । यस्तै मानसिकताको उपज हो, मनोविज्ञान हो । त्यही मनोविज्ञानले हामी आफ्नो संस्कारबाट परपर भएका छौँ । अरूको संस्कार, संस्कृति मन पराएका छौं । तिनै सुकिलामुकिला मान्छे मन परायाैं । त्यहाँको विलासिता मन परायौँ तर आफ्नो गाउँघरको सम्झना हामीलाई भएन । बिस्तारै सहरीकरण बढ्दै गयो । जुन स्वाभाविक थियो । तर सम्बन्धहरुबीचको आत्मीयता हामीले राख्न सकिएन ।
हामीले आफ्नोमा गौरव गर्न सकेनौँ । आफ्नो घरमा आमा बिरामी हुनुहुन्छ भने हेरविचार गर्न छाडेर छिमेकीकोमा के मिठो पाकेको छ भनेर चियाउँदै हिँड्यौं । यहीँबाट हाम्रो समस्या सुरु भयो ।
अहिले प्रायःको एकल परिवार छ । एकल परिवारमा भए पनि आत्मीयता छैन । उनीहरु एकआपसमा बोल्दैनन्, आत्मीयता महसुस गर्दैनन् । धेरै जसो मेसिनसँग झुण्डिएर बस्छन् । हो हामीलाई मेसिन पनि चाहिन्छ तर मेसिनले हामीलाई प्रयोग गर्ने होइन, मेसिनलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो । तर, हामीले जे गर्न नपर्ने हो त्यही गरिरहेका छांै । यसले गर्दा हृदय जोडिने सम्बन्धहरु जोडिएका छैनन् ।
हिजोआज बाबा–आमासँग पनि आत्मीयता हुन छाडिसकेको छ । काका–काकी, मामा–माइजू, फूपू–फुपाजु भनेको त हिजोआजका केटाकेटीलाई यादै हुन छाडिसक्यो ।
अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त ? यसको पनि सामाधानको उपाय नभएको होइन, हामीले केही सहज विधि अपनाउने बित्तिकै अझ भनांै हामी आफू आफैँमा रूपान्तरित हुनेबित्तिकै यस्ता समस्या रहँदैनन् ।
आफ्नोलाई प्रेम गरौं
हामी हाम्रो नाता, कुटुम्ब, समाज, घर गाउँलाई सदा सम्झिरहनु पर्छ । हामीले हाम्रो देशको भू–भागलाई धेरैभन्दा धेरै प्रेम गर्न आवश्यक छ । आफ्नो घर गाउँलाई नराम्रो देख्ने, आफूसँग भएका कुरालाई नराम्रो सम्झिने प्रवृत्ति हटाउनु पर्छ ।
हामीले सांस्कृतिक गाउँ फर्क अभियान गर्न जरुरी छ । मैले राजनीतिक भनिरहेको छैन । हामी जहाँ जान्छौं त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो संस्कार पनि लैजाने गर्नुपर्छ । हामीमा भएका राम्रा कुरालाई अनुशरण गर्ने गर्नुपर्छ । जब हामी यसरी घर गाउँको संस्कार संस्कृति अपनाउँछांै । विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं, सबैमा आफ्नो पन आउँछ अनि सबै सम्बन्धहरु फेरि जोडिन थाल्छन् ।
जब मनमा अन्धकार र घोर निराशा छाउँछ त्यतिबेला आफ्नो भन्ने कोही हुँदैन । आत्मीयताले मन खुसी हुन्छ, त्यहाँ निराशा, दुःखी, तनावm अनिद्रा हुँदैन । यदि जीवन विज्ञानमा आएर ममा अनिद्रा छ भने म पहिले नै सोध्छु तपाईंको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ ? धेरै परिवारसँग बस्नेमा त्यस्तो केही समस्या हुँदैन । परिवारसँग उठबस गर्दैमा यो निराशापना पूरै हटिसक्छ । तर, जब एक्लै बस्छ, सीमित परिवारसँग मात्र बस्छ, ऊसँग यस्ता समस्या देखा पर्छन् । त्यसकारण हामी फेरि आफ्नो मान्छेसँग जोडिनु, बढी घुलमिल हुनु आवश्यक छ ।
सम्बन्धहरु फेसबुक ट्वीटरबाट मात्र जोडिएर हुँदैन, हाम्रा पाँच इन्द्रियबाट जोडिन आवश्यक छ । हामीले सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन बोली सुनेर, भेटघाट गरेर, अंकमाल गरेर, उसको सामीप्यमा बसेर, उसको भावना बुझेर गर्न सक्छौँ । यसरी ५ वटा इन्द्रिय सहभागी भएर सम्बन्ध भयो भने हामी मजबुत हुन्छौँ ।
अहिले भएको समस्या के हो भने, मानिसहरु मेसिनसँग सम्बन्धित छन्, मेसिनसँगै मानिसको उगबस छ, इन्द्रियसँगको सम्बन्ध कत्ति पनि छैन अनि कसरी हुन्छ सम्बन्ध गाढा ?
इन्द्रियले जोडेको सम्बन्ध अत्यन्तै गहिरो हुन्छ । मेसिन हामीलाई चाहिन्छ । प्रयोग गराैं । आफ्नो पनमा फर्किऊँ । आत्मीयतामा ध्यान दिऊँ ।
ध्यान सम्बन्ध जोड्ने अचुक औषधि हो । ध्यान त यस्तो हो जब ध्यान गर्न थाल्छौँ आफैं सम्बन्ध बलियो भइहाल्छ । ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई आमा–बुबालाई माया गर, आफूभन्दा सानोलाई माया गर भनेर भनिराख्नुपर्दैन । यो स्वाभाविक हुन्छ । पानी जहाँ पनि पर्छ अनि भिजाउँछ । आगो जहाँ पर्छ त्यहाँ जलाउँछ । त्यसरी नै ध्यान गर्ने व्यक्ति जहाँ–जहाँ जान्छ त्यहाँ–त्यहाँ प्रेम बाँड्छ अनि सम्बन्ध गाढा बनाउँछ । ध्यान गर्ने व्यक्तिले गर्ने काममा उत्पादनशीलता बढाउँछ । कम काम गरेर पनि इफेक्टिभ काम गर्छ, मिहिनेत बढी गर्छ, आय–आर्जन पनि बढी गर्छ । बचेको समय परिवारलाई दिन्छ । यो अचुक औषधि हो । हामी सबैले ध्यान गर्न सिक्यौँ भने आत्मीयता र सम्पनता दुवै ल्याउँछाैं ।
लेखक एलपि भानु शर्मा प्राध्यापक पोखरा विश्वविद्यालय एवं जीवन विकास विशेषज्ञ हुन्
मगलवार, जेठ २८, २०७६, ०६:०६:००
अपेन किड्स गट ट्यालेन्ट सिजन- १ हुने
दक्षिण कोरियामा किन चलिरहेको छ ब्रा बहिष्कार अभियान ?
भदौ १७ गते मंगलबार तपाईंको राशिफल हेर्नुहोस
आज हरितालिका तीज; निराहार व्रत बसे तपस्या पूरा हुने !
ब्रतको विज्ञानः कसरी, किन र कसले बस्ने ?
भदौ १५, २०७६ सारङ्गी न्यूज
आज तीजको दर खाने दिन : के खाने, कसरी खाने ?
पोखरा स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भिसी सहित तीन जना विद्यार्थीको कब्जामा ! (भिडियो सहित) आश्विन ६, २०७६
पोखरा स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भिसी सहित तीन जना विद्यार्थीको कब्जामा ! (भिडियो सहित) सारङ्गी न्यूज
एनआरएनए एशिया प्यासिफिकको संयोजकमा ओम गुरुङ ‘अजिव’ द्वारा उम्मेद्वारी घोषणा Sarangi News
विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन रमेशचन्द्र घिमिरे
एनआरएनए एशिया प्यासिफिकको संयोजकमा ओम गुरुङ ‘अजिव’ द्वारा उम्मेद्वारी घोषणा आश्विन ४, २०७६
संविधान दिवसका अवसरमा ६३४ ब्यक्तिलाई विभुषण, अधिकारी र दीक्षितलाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप आश्विन ३, २०७६
नेकपाको शपथ ग्रहणमा कुटाकुट, थुप्रै नेताको टाउको फुट्यो भदौ २४, २०७६
अब एकताको सुत्र 'राष्ट्रवाद' बन्न सक्दैन ? भदौ २६, २०७६
'अछुत' हुनुकाे धर्म : विद्राेह भदौ ५, २०७६
नारीहुनुकाे धर्म : प्रयोगको 'साधन' मात्र हाे ? श्रावण २६, २०७६